गोकुल बास्कोटा भन्छन्, ‘हिजो बैंक लुटेको पैसा कहाँ छ ?
‘बजेटमै २०८० को चैतसम्म कसैले लगानी गर्यो भने लुटेर भए पनि लिएर आए रहेछ भने पनि लगानी गर्न पाउने भनेर अवैध कालो धनलाई सेतो धन बनाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारको भयंकर सुरुवात गरिएको छ ।
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले कालोधनलाई सेतो बनाउन बजेटमै नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन् ।***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
उनले भने, ‘बजेटमै २०८० को चैतसम्म कसैले लगानी गर्यो भने लुटेर भए पनि लिएर आए रहेछ भने पनि लगानी गर्न पाउने भनेर अवैध कालो धनलाई सेतो धन बनाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारको भयंकर सुरुवात गरिएको छ । नेपालमा विदेशी पैसाको अवैध कारोबार गर्न संस्थागत नीति नै बनाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने, ‘वाह ! अग्रगामी सरकार भ्रष्टाचारको संस्थागत यो दुई महिनामा गर्यो । बधाई छ ।
त्यहीँबाट थाहा हुन्छ हिजोको बैंक लुटेको पैसा कहाँ छ ? हिजो जे जे अपराध गरेका छन्, राज्य लुटेर, कर नतिरेर, ठूलठूला मान्छेहरुले कर तिरेका छैनन् । हामीलाई कुनै चिन्ता छैन ।’ सभामुख अग्नि सापकोटाले भयंकर पक्षपातीपूर्ण व्यवहार गरेकोमा उनले खबरदारी पनि गरे ।
यसैगरी माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थानीय तहमा पुग्दा ९ दशमलब ४, कार्यकर्ता तहमा ५ प्रतिशत र जनताको तहमा पुग्दा १ प्रतिशतमा सीमित हुने दावी पनि उनले गरे ।